Filtrer les éléments par date : dimanche, 12 janvier 2020
dimanche, 12 janvier 2020 19:32
Hery Rakotomalala: Mitsipaka marindrano ny fanondroana azy ho « mikonokonona korontana » ao amin'ny TVM
Niparitaka tamin’ny tambazotra serasera facebook androany fa « mikonokonona korontana i Hery Rakotomalala sy Bertrand Ranaivomanana ao amin'ny TVM ao », ary « mandefa ny SMS fitarihana ny mpiasa hiaraka hikorontana aminy ». Mbola miampy fa « terena ny mpiasan'ny ORTM hanao akanjo mainty dia hanao fihetsiketsehana rahampitso alatsinainy fa tsy manaiky ny tsy fanavaozana ny contrat ECD an'ireo mpiasa sasany ».
dimanche, 12 janvier 2020 19:07
Sambava: Zaza lahikely vao 9 volana narian-dreniny tany an-tsena
Voasambotry ny Zandary tao Nosiarina ny zoma 10 janoary 2020 teo ny renin'ity zaza ity, taorian'ny nanoloran'ny fianakaviana azy teo amin'izy ireo, izay niahiahy fa mety novonoiny ny zanany rehefa tsy hita niaraka taminy intsony raha niverina tao Antetezandravina, Kaominina Ambohimazala izay fiaviany izy.
Tsy nazava mantsy ny fanazavan’ilay ramatoa, izay nilaza fa nateriny any amin'ny rain-janany tany Andranaly Kaominina Antindra, ilay zaza.
Voatery naterina aty amin’ny Zandarmaria aty Sambava nanohy ny famotorana ka tamin’izay vao nihaiky ny helony ilay ramatoa fa navelany any an-tsena ny alakamisy 09 janoary 2020 tokony tamin'ny 8ora maraina ilay zaza, dia nitsoaka izy rehefa avy eo ka tsy fantany intsony iza no nandray ny zanany taorian'izany.
dimanche, 12 janvier 2020 17:21
Andry Rajoelina : « Tsy hitsahatra ny hanohana sy hanolo-tanana hamerenana ny hasin’ny Tafika Malagasy »
« Amin’ny maha filoham-pirenena no sady filoha faratampon'ny foloalindahy ahy dia tsy hitsahatra ny hanohana sy hanolo-tanana hamerenana ny hasin’ny Tafika Malagasy ny tenako ; indrindra amin’izao taona 2020 hankalazana ny faha-60 taona nijoroan’ny Tafika Malagasy izao ». Nambaran’ny filoha Andry Rajoelina io androany, nandritra ny fiarahany niara-nankalaza ny Andron’ny manamboninahitra fanao isaky ny 12 janoary, teny Iavoloha niaraka tamin'ny minisitry ny fiarovam-pirenena, jeneraly Rakotonirina Léon Jean Richard,.
« Hanjaka hatrany eo anivon’ny Foloalindahy anie ny firahalahiana, ny firaisankina ary firaisan-tsaina sy firaisam-po », hoy izy.
Harifidy Ramanandraibe: Mitantara ny nisamborana azy sy ny nisavana ny tranony
Tranga nanamarika ny fiparitaham-baovao tamin’ny facebook teto Madagasikara androany alahady 12 janoary 2020, ny fisamborana narahina fisavana ny trano fonenan’i Harifidy Ramanandraibe, mpanao gazety mpanao famakafakana ao amin’ny haino aman-jery tsy miankina i-BC eto an-drenivohitra, teny Nanisana.
dimanche, 12 janvier 2020 15:00
Jean Luc Djavojozara: Voafidy fanindroany ho Ben’ny tanànan’Antsiranana
Nametrahan’ny vahoaka fitokisana hitantana indray ny Kaominina ambonivohitra Antsiranana mandritra ny efa-taona i Jean Luc Djavojozara. Nohamafisin’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana ny vokatra vonjimaika navoakan’ny CENI, ary dia ofisialy izao ny maha Ben’ny tanànan’Antsiranana an’i Jean Luc Djavojozara.
Kandida tsy miankina no nirotsahany tamin’ny fifidianana natao ny 27 novambra 2019.
dimanche, 12 janvier 2020 14:58
Mahajanga: Mitsabo ireo traboina ny Tafika
Mandray ny andraikitra amin'ny fitsaboana ireo traboina taorian’ny fiakaran’ny ranobe vokatry ny rotsak’orana ny herinandron’ny taombaovao teto Mahajanga ny miaramila mpitsabo avy ao amin'ny RM4 na Faritany Miaramila fahaefatra eto Mahajanga, mitety ireo Fokontany miisa dimy lasibatry ny rano be, miaraka amin’ireo « Clinique Mobile » nalefan'ny fitondrana.
dimanche, 12 janvier 2020 14:04
Primatiora: Nankalaza ny Andron'ny manamboninahitra
Nandray anjara tamin'ny fankalazana ny Andron'ny Manamboninahitry ny Tafika Malagasy, fanao isan-taona isaky ny 12 janoary, ny Praiminisitra, Lehiben'ny governemanta, Ntsay Christian.
Ireo manamboninahitra zandriny no mitarika ny fibaikona, fotoana iray koa anefa io hifanakalozana ary hanamafisana ny firaisan-kina, ka ankaotran'ny hetsika izay karakaraina dia misy ihany koa gisa atolotra ny Praiminisitra sy ireo lehiben’ny manamboninahitra ho mariky ny fanajana sy fankasitrahana.
dimanche, 12 janvier 2020 13:51
Jiolahy mitam-basy sy mpanolana: Nidoboka any Tsiafahy i Nancy
Jiolahy nampitondra faisana ny mponina, indrindra ny vehivavy tamin'iny faritra Ambohipo, Ambolokandrina, Ankatso sy Antsahamamy iny i Nancy. Sady mitam-piadiana no manolana vehivavy ity jiolahy ity.
Voasambotry ny Polisin'ny Boriboritany Faha-2 ity tovolahy jiolahy mpamaky trano sy manendaka, manolana ny vehivavy ity, ary natolotra ny Fitsarana ny sabotsy 11 janoary.
Nivoaka ny didy savaranonando, nalefa any amin'ny fonjan'i Tsiafahy izy taorian'izay.